(၂)ရက်ဆက်တိုက် ရေမချိုးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ … ? – ရွှေပြည်သစ် မီဒီယာ
လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ကပ်ညှိနေတဲ့ မမြင်ရတဲ့ ပိုးမွှားတွေထဲမှာ ဘတ်တီးရီးယားပေါင်း (၁)ထောင်ကျော်နဲ့ မှိုအမျိုးအစားပေါင်း (၄၀)ကျော်ရှိပါတယ်။ တချို့ ဘတ်တီးရီးယားတွေဟာ အထောက်ပြုတယ်ဆိုပေမယ့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေက ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် (၂)ရက်ဆက်တိုက် ရေမချိုးဘူးဆိုရင်တော့ ဘတ်တီးရီယားတွေနဲ့ မှိုတွေဟာ အရေပြားပေါ်မှာ စွဲကပ်လာပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်ရေချိုးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအရာတွေကို အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဘာတွေဆိုးကျိုးတွေရှိလဲ… ? ဘတ်တီးရီးယားတွေ၊ မှိုတွေ စွဲကပ်တဲ့အခါ ယားနာတွေ၊ အရေပြားရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တချို့ ဘတ်တီးရီးယားတွေဟာ နှာခေါင်း၊ မျက်လုံးနဲ့ ပါးစပ်မှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်သွားပြီး သင့်ကို နာမကျန်းဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ (၂)ရက်ဆက်တိုက် ရေမချိုးဘူးဆိုရင် အနံ့အသက်ဆိုးတွေလည်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို အနံ့ဆိုးထွက်စေတဲ့အဓိကတရားခံတွေကလည်း ဘတ်တီးရီးယားတွေနဲ့ မှိုတွေပါပဲ။ ဒီအရာတွေဟာ ဆိုးရွားတဲ့အနံ့ပေါင်း (၃၀)ကျော်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လောက်ပဲ အေးပါစေ၊ ဘယ်လောက်ထိ ပျင်းပါစေ အနည်းဆုံး (၁)ရက်တစ်ခါတော့ ရေချိုးသင့်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်ရင်း တစ်ခါတည်း ရေချိုးလိုက်ရင်တော့ ပိုးမွှားတွေလဲ သေသလို ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာအနံ့လေးနဲ့အတူ တနေ့လုံးလည်း သင့်ကို လန်းဆန်းစေမှာပါ။
Stroke စထုပ်ခ် “(လေဖြတ်ခြင်း ရောဂါ)
ပိုက်ဆံ မကုန်ပဲ ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ
အအေးမိ ချောင်းဆိုးခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝဆေးနည်း
Shwe FM ပွဲကို အလန်းစားဖက်ရှင်နဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦ5views
အရိမေတ္တေယျမြတ်စွာဘုရား ဗုဒ္ဓဝင်အကြောင်း4views
ကိုယ့်ကြောင့် အိမ်ထောင်ရှိယောက်ျားများ ဒု၊သ၊န၊သော မဖြစ်စေချင်ဘူး ဆိုတဲ့ မေပန်းချီ4views
အစိုးရဝန်ထမ်း ပင်စင်လစာတိုးပြီ၊ အနိမ့်ဆုံး ပင်စင် ကျပ် ၇၀၀၀၀ ခန့်ရရှိနိုင်3views
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီး ဂင်ဂျန်ဒီ3views
ရေနံချောင်းမြို့ အထက( ၁) မှ ထူးခြားသော လူရည်ချွန် ညီအကိုအရင်း (၄) ဦ3းviews
ရွှေမှုံ့နေရာကိုဆက်ခံတော့မယ်ဆိုတဲ့ ငွေမှုံရတီ3views
ကြေးမုံ သတင်းစာများ ဒေါင်းလုတ် ရယူရန်3views
လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေထိုင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျေ်2views